Abakhiqizi nabahlinzeki be-200A Cable | China 200A Ikhebula Izesekeli Factory
I-Anhuang ekhethekile ku-Class Bushing Extender, sinikezela ngekhwalithi ephezulu yeClass Bushing Extender. Okujwayelekile: I-600A yeklasi bushing extender ivumela ukufakwa ezindaweni ezijwayelekile ezinamandla angasebenzi ezinamandla angama-600A okuhlanganisa ukuhlanganisa ukunciphisa amapulagi, ukuxhuma ama-plugs kanye nama-apparatus bushings. I-200A Interface break interface ye-Elbow surge arrester kanye nesixhumi sendololwane. Lapho iqoqelwe kuzinto zokukhwelana, inikela ngeyunithi yokucwilisa ngokuphelele, evikeleke ngokuphelele. Okuqukethwe Kwithuluzi: I-EPDM bushing extender Clearing Paper ...
Isingeniso: I-15kV 200A Ikhefu lokulayisha Elbow Isixhumi ukunqanyulwa kwe-plugin okuvikelwe ngokuphelele futhi okuvinjelwe ukuxhumanisa ikhebula elingaphansi komhlaba ekusatshalalisweni kwamandla kagesi we-pad-mound transformer, ibhokisi legatsha elinikezela ngogesi, ibhokisi legatsha lekhebula elihlonyiswe nge-load break bushings. Isixhumi sendololwane kanye nokufakwa kwe-bushing kufaka izingxenye ezibalulekile zazo zonke izixhumanisi zekhefu lokulayisha. Ingakwazi ukuhlangabezana nokufunwa kwemigqa yenuzi. Isicelo: Isixhumi se-Loadbreak Elbow sixhunywe ngokuphelele futhi ku ...
Anhuang ezikhethekile Bushing kahle, thina ukuphakela izinga okusezingeni Bushing kahle. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC. Isingeniso: 15kV / 24kV 200A Bushing Well isetshenziswa kakhulu kumjikelezo wamandla aphezulu we-pad-mounted, transformer submersible, switch gear, njll. I-loadbreak bushing faka imicu emthonjeni womhlaba wonkana ukuhlinzeka umsebenzi ofanayo njengomthwalo obalulekile break bushing. I-bushing isetshenziswa kanye nezesekeli zekhebula njenge: bushing insert, Rotatable F ...
Anhuang ezikhethekile Bushing Faka, thina ukuphakela izinga okusezingeni Bushing Faka. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC. Isingeniso: 15kV 200A Bushing faka imicu emthonjeni womhlaba wonke wokuhlinzeka ngomsebenzi ofanayo njengokuhlangana komthwalo obalulekile. Ukusebenzisa ukufakwa kwe-bushing kwenza ukufakwa kwensimu nokufaka okunye kwenzeke futhi kusebenze kahle. Ukufakwa kwe-Bushing nezixhumi zezindololwane kuhlanganisa ukukhuphuka kwezingxenye ezibalulekile zazo zonke izixhumanisi zekhefu lokulayisha. I-bushing Insert isebenzisa ilungelo lobunikazi ...
15kV 200A Layisha Break Elbow Isixhumi
I-Anhuang ekhethekile ku-Load break Elbow Isixhumi, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Loadbreak Elbow Isixhumi. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-TEEE386, ne-IEC. Isingeniso: 25kV 200A Ikhefu lokulayisha Elbow Isixhumi ukunqanyulwa kwe-plugin okuvikelwe ngokuphelele futhi okufakwe umugqa wokuxhuma ikhebula elingaphansi komhlaba ekusatshalalisweni kwamandla kagesi we-pad-mound transformer, ibhokisi lamandla eliseduze lokuhambisa ugesi, ibhokisi legatsha lekhebula elihlonyiswe nge-load break bushings. Isixhumi sendololwane kanye nokufakwa kwe-bushing kufaka i-essentia ...
I-Anhuang ekhethekile ku-Loadbreak Elbow Isixhumi, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Loadbreak Elbow Isixhumi. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC. Isingeniso: Isixhumanisi se-Elbow siwu-plug-in ovikeleke ngokuphelele futhi othukiwe wokuxhunywa kwekhebula elingaphansi komhlaba ekusatshalalisweni kwamandla kagesi we-pad-mound transformer, ibhokisi legatsha elinikezela ngogesi, ibhokisi legatsha lekhebula elihlonyiswe ngama-break break bushings. Isixhumi sendololwane kanye nokufakwa kwe-bushing kufaka izinto ezibalulekile zazo zonke ...
15kV 200A Rotatable Feedthru Faka
U-Anhuang okhethekile ku-Rotatable Feedthru Insert, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Rotatable Feedthru Insert. Umkhiqizo uhlangabezana nazo zonke izidingo ze-IEEE Standard 386 futhi uyashintshana ngokuphelele nemikhiqizo encintisana nayo. Imicu engu-15kV 200A eguquguqukayo yokufaka ifakwa emthonjeni womhlaba wonkana ukuhlinzeka ngomsebenzi ofanayo nowobubanzi be-loadbreak bushing. Ukusebenzisa ukufakwa kwe-bushing kwenza ukufakwa kwensimu nokufaka okunye kwenzeke futhi kusebenze kahle. Ukufakwa kwe-Bushing nezixhumi zendololwane kuqukethe i-t ...
U-Anhuang okhethekile ku-Rotatable Feedthru Insert, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Rotatable Feedthru Insert. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC. Isingeniso: 24kV 200A Rotatable feedthrough insert is used to provide two bushings from a single apparatus bushing well。 Kwenza kuguqulwe ama-radial-feed transformers ukondla ama-transformer nokungeza ukuvikelwa kokubanjwa okuku-inthanethi okulula nokusebenzayo. I-ratchet yayo enelungelo lobunikazi, eyakhelwe ngaphakathi, evimbela ama-opharetha ngengozi b ...
Anhuang ezikhethekile Bushing Faka, thina ukuphakela izinga okusezingeni Bushing Faka. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC. Isingeniso: I-24kV 200A Bushing faka imicu emgodini we-bushing jikelele ukunikeza umsebenzi ofanayo njenge-break load load bushing. Ukusebenzisa ukufakwa kwe-bushing kwenza ukufakwa kwensimu nokufaka okunye kwenzeke futhi kusebenze kahle. Ukufakwa kwe-Bushing nezixhumi zendololwane kuqukethe izinto ezibalulekile zazo zonke izixhumanisi zekhefu. I-bushing Insert isebenzisa i-w ...